Rakanaka Raki Meseji kune vedu Vadzidzi Vanokwikwidza | Fred Astaire
Meseji Yerombo Rakanaka kune vedu Vakwikwidzi veVadzidzi
Sezvo isu tichigadzirira yedu yekutanga National Dance Makwikwi ye2020, ini ndoda kutora uno mukana kushuvira vese vatinokwikwidza, vese amateur uye nyanzvi - Rombo rakanaka! Kunyangwe ichinzi 'makwikwi', ndinokukurudzira kuti ugare uchiedza uye kufunga nezvayo zvakanyanya sechiitiko. Hapana vanokundwa pane imwe yeedu Fred Astaire Dance Studios Zviitiko zveNyika, vanokunda chete… kana iwe uine pfungwa chaiyo.
Ndinoda kuti urangarire kuti sei wakatanga zvidzidzo zvekutamba pakutanga. Yakanga isiri yekukwikwidza, yaive yezve mabhenefiti anogona kuunzwa nekutamba kuhupenyu hwako. Uye sekuziva kwedu tese, izvo mabhenefiti zvinotitevera isu kubva padanho repasi uye muhupenyu hwedu hwezuva nezuva zvakare:
• Kutamba uye kukwikwidza kunogona kukushandura iwe kuva munhu anokwanisa kuzvibata ivo mune chero mamiriro ezvinhu zviri nyore uye nemumwe mudiwa.
• Kutamba nemumwe wako kunodzidzisa kutaurirana (zvese zvekutaura uye zvisiri zvemazwi) apo iwe uchitungamira pamwe, kana kutevera zvirevo kubva, kune waunotamba naye. Kutamba kunogadzirawo pfungwa yekudyidzana, kubatana pamwe uye zvinangwa zvakagovaniswa.
• Kukwikwidzana nevatambi vehumwe hunyanzvi hunyanzvi sezvo iwe uchizobatsira kufambisira mberi hunyanzvi hwako hwekutamba uye nekukupa iwe unoshamisa pfungwa yekudada uye kuvimba.
Kutamba kunobatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvehutano - kubva pakurasikirwa nehuremu uye kushushikana kwekushushikana kune kugwinya kwemoyo.
• Iwe unowana mukana wekushamwaridzana neshamwari dzekare, uye nekuita shamwari nyowani kubva kumatunhu ese enyika.
• Iwe unenge uine nguva yekuona inonakidza nzvimbo dzakatenderedza nyika, uye ita izvi zvekutamba zviitiko zvechokwadi zororo getaways!
Shamwari uye mhuri vakagamuchirwa kuti vagoverane chiitiko ichi newe, uye vanokupa mufaro paunenge uchikwikwidza. Vaenzi vanogona kutenga matikiti eSpectator ezuva chairo reZuva kana Manheru nguva pamberi pako studio kana pasuo.
• Uye yangu-yenguva-yese chinhu chandinodisisa nezve maFADS Nationals ndiko kupenya! Iko hakuna chimwe chiitiko chinotibvumidza isu kupfeka mune edu akanakisa uye kunakidzwa nechido chiri kupedzisa kwehunyanzvi, mutambo, uye sainzi - tichiita izvo isu tese zvatinoda kwazvo, uye ndiko KUSVIRA !!!
Nekudaro, nakidzwa nekukwira uye uuye mabhenefiti ese ayo FADS Yenyika Yekutamba Makwikwi Anopa, uye iwe uchave uri zvirokwazvo anokunda!